शब्दकोश: चिठी ना कोइ सन्देश .. ..
चिठी ना कोइ सन्देश .. ..
जगजीत सिंह [1941 - 2011]
दुई साताअघि अस्वस्थ भएर उनी मुम्बईस्थित लिलावती अस्पतालमा भर्ना हुँदा सबैतिर अत्यास बढेको थियो । गजल गायनका पारखीहरू ट्विटर, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि चिन्तायुक्त स्वर निकाल्दै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै थिए । मस्तिष्कमा रक्तस्राव भएर प्रिय गायक ७० वर्षे उमेरमा कष्टसाथ सास लिँदै थिए । पछि सुनियो- आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, सुधार देखियो । स्रोताको मन पनि थामियो ।
आज बिहान पो खबर आयो एकाएक – गजल सम्राट् जगजित सिंह रहेनन् ।
गजल गायनलाई सम्मानजनक उँचाइमा पुर्‍याउन अहम् योगदान पुर्‍याउने जगजितले अस्पतालमै नश्वर चोला त्यागे । तर उनी त हाम्रो कम्युटर, सीडी, मोबाइल, आइपोड लगायतका संगीत संग्रहमा अझै सुरक्षित बस्नेछन् अब । जो मान्छे भौतिक रूपमा रहँदैनन्, उसको अनुपस्थितिमा उसका अवशेष र सम्झनाले हामीलाई झन् बढी जुरुक्क बनाउँछन् । गजल गायनमै डटेर लागेका जगजीत जस्ता गुनिला व्यक्तिको प्रभाव त झन् अचाक्ली छ, मनसम्मै गढ्ने । एउटा स्रोताको जीवनकालभरि पुग्ने गरी जगजितको सांगीतिक तरंग पर्याप्‍त छ । उनका एलबमहरूमध्येमा मलाई सज्दा मन पर्छ । लता मंगेशकरसँग मिलेर गाएको त्यो एलबममा यति कोमल गजल छन्, धागोभन्दा पनि पातलो रेशाले सुमसुम्याए झैं छुन्छन् अन्तरमा । त्यसमध्ये पनि ‘गमका खजाना तेरा भी है’ भन्ने गजल त अनगन्ती पटक सुनिएर पनि अझै सुनिँदैछ ।
संगीतमा राम्ररी नभिजेकाहरू शास्त्रीय संगीतसँग तादात्म्य राख्दै मन्द रफ्तारमा गाइने गजललाई ‘निद्रा डाक्ने गीत’ को रूपमा अर्थ्याउँछन् । छेउमा कसैले गजल सुन्न लाग्यो भने ‘निद्रा लाग्यो’ भनिदिन्छन् । तिनका लागि ‘लोरी भाका’ तुल्य गजल गाउने गायक आज आफैं निदाएका छन् । लाखौं गजल पारखी भने उर्लिएर उठेका छन् र उनको संगीतलाई जागरुक भएर अझ अँगाल्न अग्रसर देखिएका छन् ।
सज्दा, इन्तेहा, इन्साइट, जज्वात, द अनफरगेटेबल्स, अ जर्नी विथ चित्रा सिंह, फे टु फेस, लभ इज ब्लाइन्ड जस्ता जगजितका ८० वटा जति एलबमका गीत-गजल सुन्न पर्याप्‍त समय नै छुट्याउनुपर्छ । तर समय मात्र भएर अनि सुन्नलाई कान मात्र भएर पनि हुँदैन । मन र मगजको युगल संयोजन गर्नुपर्छ, अनि मात्र बल्ल तालले काम गर्छ । नत्र स्रोताको भूमिका अपूरो रहन जान्छ । असल गीत-गजल सुन्नु एक खालको ध्यान नै हो ।
जगजितको सम्झना गर्दै उनीप्रति श्रद्धाञ्जलिस्वरूप उनकै केही गजल सुनौं -
* गमका खजाना
* वो कागज की कश्ती
* मेरा गीत अमर कर दो
* चिठी न कोइ सन्देश
* हम तो है परदेश मे
अन्त्यमा, जगजीतले गाएको नेपाली गीत पनि सुनौं । आलोक श्रीको संगीतमा सोलो एलबम ‘संयोग’ मा गाएका थिए उनले । त्यही एलबमबाट एउटा गीत -
* कुन माया सदर भो
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, October 10, 2011
Deepak Jadit October 10, 2011
भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली जगजीत सिँहलाई !
Dilip Acharya October 10, 2011
मेरो सदाबहार र सर्बप्रिय गजल सम्राट प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली !
Roopess October 11, 2011
एक बेला जगजितले गाएको नेपाली गीतको एल्बमको प्रोमो बोल्न पाउँदा ज्यादै खुशी भएको थिएँ। श्रद्धान्जली त्यो स्वरलाई!
Bindesh Magar October 19, 2011
जगजित गजल सम्राट हो कि गजल गायनमा मात्रै सम्राट हो त्यो यो ज्यानले नजानेको अबस्था । :P
शुभकामना भरि .. ..